पलिकाको समृद्धिका लागि ठोस काम के–के भयो ? यस्तो भन्छन् जनप्रतिनिधी !
भदौ १४, २०७८ सन्ध्या पौडेल
मुलुकमा संघीयता आएपछि पहिलो पटक देशैभर स्थानीय पालिकाहरुको निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचन पूर्व आफू निर्वाचित भए विभिन्न राम्रा काम गर्ने उनीहरुले आश्वासन बाँडे । त्यसै मध्येबाट हालका जनप्रतिनीधि चुनिएर आएका हुन् । उनीहरुले पनि आफू निर्वाचित भए विभिन्न राम्रा काम गर्ने भनी ‘मेरो कसम’ देखि विभिन्न आश्वासन बाँडेका थिए । निर्वाचित भएपछि पालिकाको समृद्धिका लागि ठोस काम चाही उनीहरुले के गरे ? त्यसै मध्ये पर्साको विभिन्न पालिका प्रमुखहरुसँग लिएको प्रतिकृया :
न रोड, न नाला केही नभएका गाउँहरुलाई जोडेर हतार हतारमा महानगरपालिका घोषणा गरिएपछि सबैभन्दा ठूलो फोहोरको समस्या समाधान गर्न ल्याण्ड फिल्ड साईड बनाइएको छ । ल्याण्ड फिल्ड साइड मै मेडिकल क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोर विसर्जन गर्ने छुट्टै व्यवस्था पनि गरिरहेका छौं । कुहिने फोहोर अलग्गै राख्न ३६ हजार बकेटहरु घर–घर र पसलहरुमा बाँड्दै छौं । जम्मा भएका फोहोर एक ठाउँमा राखेर फर्टिलाईजर गरी फोहोरबाट मोहर बनि बनाउने उद्देश्य छ । छपकैयामा सिपी प्लान्ट सुरु गर्याै । जुन एमडी वनको पानी लगेर, प्रोसिभर लाईनको पानी लगेर त्यहाँ प्रशोधन गर्दैछौं । वीरगंज बसपार्क पनि संचालनमा ल्यायौं । महानगरमा जति पनि स्वास्थ्य सेन्टर छन्, सबैमा कर्मचारी राख्ने, औषधी लगायत अन्य सबै स्रोत साधन पु¥याउने काम गरियो । शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकाससंगसंगै पुस्तकालय, साईन्स ल्याब, खानेपानी, कोभिडको लागि सेनिटाईज, मास्क लगायत सबै कुरा सम्पूर्ण विद्यालयमा पु¥याइएको छ । स्मार्ट पढाई, टेक्नोलोजी सबै दिएका छौं । उज्यालो वीरगंज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लगानीमा योजनाहरु चालु गरेका छौं । भेडहा खोलाको बाँध फुटेर नगर डुवान हुने समस्या अन्त्यका लागि त्यहाँ बाँध बनाउन २५ करोड रकम विनियोजन भएको छ । करिब १ सय २० किलोमिटर सडक कालो पत्रे गरिएको छ । करिब १ सय १८ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ । कच्ची बाटो ग्रेभल पनि करिब २ सय ५० किलो मिटर गरिएको छ । सुत्केरी र गर्भवती महिलाको लागि करिब १ करोड ५० लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।
कुनै किसिमको स्रोत साधन नै नभई रातारात गाउँबाट नगरपालिका भएको बहुदरमाईमा हरेक क्षेत्रलाई समेटी विकास गरिएको छ । अनेकौं चुनौतिको बाबजुद सबैको सामना गरी अहिले नगरपालिकाको अनुभूति हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि लगायतको क्षेत्रमा काम गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसंगसंगै पर्साको सदरमुकाम वीरगंज आउने बाटोको ढलान सहित पक्की र नाला निर्माण गरिएको छ । केही ठाउँमा बाँकी रहे पनि नगरपालिका भित्र पनि २३ वटा टोलमा ढलान सडक र नाला बनाइएको छ । हरेक घरमा खाने पानी र किसानलाई सिंचाइको लागि ड्युब टयुबेल बोरिङ्ग जडान गरिएको छ । जिर्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न मठ मन्दिरको भवन मर्मत सम्भार गरी विजुली पनि जडान गरिएको छ । पालिकाको दुईवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी थप गरी प्रत्येक वडाका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चिकित्सक को पनि व्यवस्था गरिएको छ । पालिका भित्र बर्थिङ्ग सेन्टरको पनि स्थापना गरिएको छ । नगरबासीको सेवाको लागि एम्बुलेन्स पनि खरिद गरिएको छ । अलि झनझटिलो प्रकृयाले गर्दा अहिले भन्सारमा रहेको छ । कुनै आपत विपतको बेला नगरबासीलाई आवश्यक पर्ने रक्तको लागि पालिकाबाटै निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको महामारीको बेला पनि नगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । कोभिडमा खेटका चिकित्सकहरुलाई दोब्बर भत्ता दिइएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न तथा गरिब परिवारलाई ५/५ हजार चामलको बेरा, तेल, दाल, आलु प्याज जस्ता राहतहरु वितरण गरिएको छ । बहुदरमाई वडा नं. ७ मा कृषि तरकारी जोन एरिया बनाई आधुनिक कृषि सामग्रीहरु दिइएको छ । किसानलाई बेमौषमी तरकारी खेतीका बारे तालिम दिई बिउको किट, स्प्रे टंकीहरु वितरण गरिएको छ । यो वर्ष नगरपालिका भित्र ग्याँस, चुलो वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । दलित गरीब परिवारलाई प्रत्येक वर्ष चार्डपर्वको समयमा लुगा कपडा दिदै आएका छौं । दलित परिवारको अर्थिक स्तर उकास्न सिलाई कटाई सिकाई मेसिन समेत हस्तानान्रण गरिएको छ । वडा नं. ९ का एक जना डोम परिवारलाई कम्पाउण्ड वाल लगाएर २ कोठ्ठे भवन, शौचालय, किचेन, बाथरुम भएको घर बनाएर दिएका छौं ।
बहुदरमाई नगरपालिका भित्र कक्षा ८ देखि कक्षा १० सम्मका प्रत्येक स्कुलका छात्राहरुलाई पर्सामा पहिलो पटक हामीले नै साईकल वितरण गर्ने काम गरेका हौं । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षको सय दिनसम्म विभिन्न युवालाई प्रतिदिन रु ५ सय १७ का दरले रोजगार दिइएको छ ।
उपमेयरहरुलाई प्रश्न ! न्यायीक समितिले कतिको न्याय दिलाए ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, भौतिक पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा राम्रै काम गरिएको छ । सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा साँघुरो सडकलाई फराकिलो गरी कालेपत्रे र ढलान गरिएको छ । पर्साको सबै पालिकामाभन्दा बढि कालेपत्रे सखुवाप्रसौनीमा नै (पिच) र ढलान सडकको निर्माण गरिएको छ । महुवनदेखि प्रसौनीसम्म ७ किलोमिटर, महुवनदेखि देउरबानाको करबोलासम्म करिब ५÷६ किलो मिटर, जनता सडकदेखि अवराहासम्म २ किलो मिटर लगायतको ठाउँमा कालेपत्रे सडक भइसकेको छ । हाम्रो गाउँपालिका जस्तो बाटो कुनै पनि गाउँपालिकाको छैन । अन्य ठाउँकोभन्दा छुट्टै मापदण्ड बनाई कुनै पनि रोड १३ फिटभन्दा बढिकै निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश नं. २ मै दोस्रो नम्बरमा हाम्रो गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा गराइयो । पालिकाका कुनै बच्चा अपाङ्ग नजन्मोस् भनी गर्भवती महिलालाई पौष्टिक खानपिनको व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न गर्भवती महिलालाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने अवसर दिएका छौं । ‘बेटी बढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत कक्षा १० पास गरेका ११ कक्षामा पढ्ने छात्राहरुलाई साईकल वितरण गरिएको छ । पहिला विद्यालयमा भूईमै बच्चाहरु पढ्ने अवस्था थियो, अहिले प्रत्येक विद्यालयमा डेक्स, बेन्च, शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । पालिका भित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स, निःशुल्क बारुणयन्त्र, किट, क्यालसियम फ्रि, निःशुल्क सरसफाई किट जस्ता कामहरु गरिएको छ ।
कृषि कर्मको लागि किसानलाई लाभांवित हुने गरी कृषिकलाई उन्नत जातको बिउ, बिजन, आधुनिक कृषि उपकरणहरु, पशुमा पनि उन्नत जातका बाख्राहरु वितरण गरिएको छ । पशुपालन, कृषि कर्मको लागि आवश्यक तालिम पनि दिइएको छ । पालिकालाई कृषिको हब बनाउन गोठ सुधारमा लगानी, अनुदान, स्प्रे मेसिन, विधुत्को सहजता, तरकारी खेतीको लागि आवश्यक प्रविधि र बिउ बिजन, जेनेरेटर लगायतको काम गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायको लागि पारसनाथ मन्दिरमा पर्खालको कामहरु हुँदैछ ।
पालिका भित्र क्रमशः सबै क्षेत्रलाई समेटेर विकास गरिएको छ । मुख्यतः गाउँपालिका भित्र प्लस २ स्थापना गरी प्रदेश सरकारसंग कम्पयुटर इन्जिनियररिङ्गको मांग गरी कक्षा संचालन गराई प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको छ । जनताको स्वस्थ्यको अवस्थालाई मध्यनजर गरि गाउँपालिकामा वडास्तरी २ वटा एमबिबिएस डाक्टरहरु राखी २ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याइएको छ । एम्बुलेन्स सेवासंगसंगै प्रत्येक वडामा बर्थिङ्ग सेन्टरको स्थापना गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत प्रत्येक वडामा नाला र सडक ढलानको काम भएको छ । प्रदेशमै सबैभन्दा बढि सौर्य सिचाई प्रणाली अन्तर्गत किसानलाई खेतीपाती गर्न ८०/९० वटा सौर्य सिचाई प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको छ । साना किसान र दलित कार्ड लागु गरी ग्याँस, चुला, सिलिण्डर वितरण गरिएको छ । पालिकास्वर्ण योजना अन्तर्गत गाउँपालिका भित्र छोरी जन्मिने वितिकै उच्च शिक्षा अवाश्यक खर्च, विवाह लगायतको लागि २ लाखको बिमा योजना लागु गरिएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकामा हालसम्म ४ सय २० जना छोरीहरुको बिमा गरिसकिएको छ । यो महिनामा लभगभ ३ सय जति थप विमा हुन गइरहेको छ । कक्षा ८ सम्म पढेर घरमै बसेका बालिकाहरुलाई प्रोतोसाहन गर्न जिल्लामै पहिलो पटक छिपहरमाई गाउँपालिकाले नै साइकल वितरण गरेको छ । विद्यालय, धर्मशाला, गाउँको बस्ती नै बनाउन प्रयास भइरहेको छ । गाउँपालिकास्तरमा गरिब, असहाय, बढि छन् । उनीहरुलाई बस्ने घर छैन, तीनीहरुको लागि ३ कोठे भवन, किचेन, शौचालय गरि १५/२० वर्षसम्म रहने गरि आवाशको व्यवस्था गर्न गइएको छ । यो योजना जिल्लामै पहिले हुनेछ । कार्यक्रमको नाममा अनावश्यक रुपमा हुँदै आएको खर्च रोकिएको छ । मेडपा योजना अन्तर्गत कर्मचारी राखी गाउँ टोलमा नै कर्मचारीले पालिकाभित्रका जनतालाई विभिन्न किसिमका तालिम दिई कसरी अर्थिक समुन्नत हुने भन्ने कार्यक्रमहरु गरिएको छ ।
#स्थानीय सरकार #वीरगंज महानगरपालिका #बहुदरमाई नगरपालिका #सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका #छिपहरमाई गाउँपालिका #पर्सा
सोमवार, भदौ १४, २०७८, ०१:०८:००
भदौ ३१, २०७८ सन्ध्या पौडेल